लोकतन्त्रले जनतामा आएको परिवर्तन यस्तो छ ,बाँकी तस्बीर नै काफी छ , तपाईं के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
लोकतन्त्रले जनतामा आएको परिवर्तन यस्तो छ ,बाँकी तस्बीर नै काफी छ , तपाईं के भन्नुहुन्छ नी?
काठमाण्डौं। ग’रिव,म’जदुर ‘,उत्पि’डन वर्गको नि’मित स’ङघर्ष भयो। दश बर्षे ज’नयुद्ध भयो दे’श कयन वर्ष प’छि धके’लियो यति सम्म त ठिकै थियो। रा’जाको शा’सन ता’नाशाहि भयो भनेर त्यसलाई फा’ल्न अा’म ज’नता उ’ठे नेता’हरुको पछि लागे क’यौ छोरी, चेलि,भाउ’जु ,दिदिहरुको सि’उदो पुछियो अन्तत रा’जा फालियो जनताको जि’तमा खुसियाली मना’ईयो।
फा’ल्ने ज’ति सबै फा’ले ल्या’उने ज’ति सबै ल्याए पदमा पुग्ने पर्ने स’बै पु’गे सत्ताको हा’लिमुहाली ग’रे पात्रहरु फे’रिए प्रवृति उ’स्तै रह्यो र एक राजा फालेर हजारौ राजाहरु जन्मिए अाज त्य’सैको प्र’तिविम्व यो त’स्विरमा देखिन्छ।
जन’ताको लागि जन’ताद्धारा ल्या’ईएको शा’सनमा जन’प्रतिनिधी नेता सां’सद मन्त्री अन्य उच्च’पदस्थहरु एउटा सामान्य मा’निस हुदै रा’जर्सी छाट’काटमा पु’गे।जनताको देशमा उत्पा’दन सुन्य छ ज’नताको कर’बाट उठाईएको रकम विकासमा लगाउनुको सा’टो थामि न’सक्नुको सेवा सुविधा लिए सम्पुर्ण परि’वर्तनको भोग गरे तर जनताको जिवन उस्तै र’ह्यो।
एक रा’जा फालेर स’यौ राजा जन्मि’एको कारण देशका युवा भविष्य’का कर्णधा’रहरु सड’कपेटीमा यसरी अरुले दिएको भरमा प्रा’ण धान्न जि’उन बा’ध्य छन । नेतृत्वलाई यो तस्वि’रको प्रति’विम्मले छु’दैन भने तिनिहरु भि’त्र मानवता छैन भनेर बु’झ्न सकिन्छ। जन’ता ढाटेर कति स’मय चल्छ संसार’को सबै भन्दा श’क्तिशाली जनता नै हु’न चाहे भने कुनै पनि शा’सन सजिलै ग’लहत्याउन सक्छन।
जहाँ अन्या’य अत्या’चारको परा’काष्ट हुन्छ उ’हिं विष्पोटन हुन्छ यदि नेतृत्व सु’ध्रिएन भने वि’स्पोटन हुने पक्का छ।
सरकारले अर’बौ राह’त उप’लब्धी गराएको दा’वि गरिरहदा यता त’स्विरले त्यो अर’बौ कता गयो स’रकार भनेर प्रश्न खडा गरिरहेको छ रोगले है’न भो’कले मर्न बाट ब’चाउ सरकार समक्ष आ’वाज पुर्याउ। तस्बिरहरु सामाजिक संजालबाट लिईएको हो।
Previous राष्ट्रियसभाको नाम ‘हरूवा राहत सभा’ राख्न खगेन्द्र संग्रौलाको सुझाव,हेर्नुहोस!
Next घर फर्किन नदिएको झ्वाँ’कमा नेपालीहरुले साउदीमा सरकारवि’रुद्ध बिरोध प्रर्दशन (भिडियोसहित)
8 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता